Wasiiro ka tirsan DF oo ku wajahan PUNTLAND - Caasimada Online
Home Warar Wasiiro ka tirsan DF oo ku wajahan PUNTLAND
Wasiiro ka tirsan DF oo ku wajahan PUNTLAND
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte ayaa caawa kulan la qaatay guddi wasiiro ah oo ay ka mid yihiin Wasiirka Waxbarashada, Wasiirka Haweenka, Wasiirka Dhalinyaradda, Wasiirka Amniga, Wasiirka Warfaafinta, Wasiir ku xigeenka Caafimaadka iyo Wasiirka Xanaanada Xoolaaha.
Gudigaana ayaa warbixin ka siiyey Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dadka soo gaaray magaalada muqdisho iyo sida loo qaabilay, iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka tirade badan ee soo gaaray magaalooyinka Boosaaso iyo Berbera.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Siciid Xuseen Ciid ayaa gudiga uga warbixiyey dadka soo gaaray magaalada Boosaaso oo tiradoodu gaarayso 5,000 qof oo isugu jira Soomaali, Ethiopian iyo Yemaniyiin.
“Waxaa soo gaaray Boosaaso dad tiradoodu gaarayso 5,000 qof, waxaa gurmad lixaad leh u fidiyey dadka deegaanka oo ay hormuud u yihiin Culima u diinka, Ganacsatada iyo maamulka Puntland, waxaana dadka soo dhaafaya Boosaaso la siiyaa lacag jid mar ah oo ay ku gaaraan deegaamada ay ku wajahan yihiin. Waxaa jira dad faro badan oo ku sugan magaalada Mukulla oo ah dariiqa kaliya ee dadku soo maraan ku waas oo ku soo wajahan Soomaaliya” ayuu yiir Wasiirka Xanaanada Xoolaha
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa gudiga u sheegay muhiimada ay leedahay in loo diro wafti wasiiro ah Maamulka Puntland, si dadka halkaas jooga iyo kuwo imanaya ay isaga kaashadaan la socdkooda dhanka amniga iyo diwaan galintooda qaxootinimo.
Ugu danbayntii Gudiga ayaa baaq u diray Wasaaradaha in dhamaan shaqaalahooda dowlada ay ku wacyi galiyaan in qof walba iska jaro wuxuu awoodu mushaarkiisa, taasna waxaa iska kaashanaya Agaasimayaasha Wasaaradaha iyo Gudiga Gurmadka.